Taliyihii Ciidamada Danab oo Xabsiga laga sii daayay | Dhacdo
Home Wararka Maanta Taliyihii Ciidamada Danab oo Xabsiga laga sii daayay
Taliyihii Ciidamada Danab oo Xabsiga laga sii daayay
Ismaaciil Cabdi Maalik Taliyihii hore ee Ciidamada Danab ee Xoogga dalka Somaliya ayaa dib u helay xuriyadiisa, kadib markii ay sii deysay maxkamadda Ciidamada qalabka sida.
Sida wararka ay sheegayaan Xafiiska Xeer illaalinta ayaa keeni waayay cadeymo buuxa oo ku saabsan eedeymaha culus ee loo soo jeediyay Gaashaanle Ismaaciil Cabdi Maalik Taliyihii Ciidamada Danab ee xilli hore xil ka qaadista lagu sameeyay.
Horay waxaa loogu soo eedeyay Ismaaciil ku tagri fal hub ay Ciidamada gaarka ah ee Danab ay Al-shabaab ka furteen, waxaana jiray in Odayaasha dhaqanka iyo Xildhibaanno ku dhaw Taliyaha ay sheegen in si gaar ah uu ugu xirnaay Madaxweyne farmaajo.
Ugu dambeyn Taliyaha ayaa saaka oo Khamiis ah waxaa fasaxday maxkamadda Ciidamada, kadib markii kiiskiisa muddo uu soo socday.
Ka sokow eedeymaha loo jeediyay Sarkaalkaan ayaa wararka soo baxaya waxa ay sheegayaan sababta xilka & xabsiga loo dhigay inay tahay taageero Ciidan uu u muujiyay Ra’iisul Wasaarihii xilka laga qaaday Xasan Cali Khayre oo isku reer ay yihiin.
Previous articleCiidamada ammaanka oo Muqdisho ku toogtay rag hubaysan
Next articleGolaha Wasiirrada oo ansixiyey Guddiga Maamulka Saadaasha Hawada Soomaaliya